Floreal Madagasikara : asa anarivony natsahatra (NewsMada) | AEMW
Floreal Madagasikara : asa anarivony natsahatra (NewsMada)
Orinasa afakaba anisan’ny lehibe indrindra eto amintsika ny Floreal Madagasikara. Mampiasa olona maherin’ny 3.000, ary ahitana ozinina telo eto Antananarivo. Manomboka ny 29 aogositra ho avy izao, voatery nakatona vonjimaika ny ozinina iray (usine II) amin’izy ireo, tojo amin’ilay antsoina hoe « fampitsaraharana noho ny antony teknika » (chômage technique). Nohazavain’ny mpitantana ity orinasa ity fa antony ny fihenana hatrany amin’ny 50% ny famandrihana nataon’ny mpanjifany, izay saika miondrana any Royaume –Uni ny ankamaroany.
Nihena ny mpanjifa
Voakasik’izany ny ao amin’ny ozinina II, manamboatra akanjo bà, satria ao anatin’ny vanim-potoana mafana rahateo any amin’io firenena io. Eo koa ny fisintahan’ity firenena ity (Brexit) ao amin’ny Vondrona eoropeanina (UE), ka tsy hita mazava intsony ao amin’ny lisitry ny mpanjifa manao famandrihana.
Niorina eto Madagasikara ny taona 1990 ity orinasa afakaba ity. Nilaza ny mpitantana fa tsy maintsy arahina ny onjan’ny tsena, nefa ampifandrindrana koa ny fanalefahana ny fahasahiranan’ny orinasa sy ny mpiasa voakasika.
← Fiainam-pikambanana sy finoana : miatrika hetsika lehibe ny Tilin’ i Madagasikara (NewsMada)
Fiaraha-miasa : mpianatra 31 nahazo vatsim-pianarana ho any Sina (NewsMada) →